🥇 aza ụlọ ọgwụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 31
Vidiyo nke ndekọ ego nke ụlọ ọgwụ eze
Nyere akaụntụ maka ụlọ ọgwụ eze
Ọrụ nke ụlọ ọgwụ eze chọrọ ezigbo nyocha na njikwa nke ndị ahịa, ndị dọkịta na ndị nchịkwa. Lọọgwụ eze na-aza ajụjụ akụrụngwa bụ sistemụ arụmọrụ nke na-enyere ma ndị nchịkwa aka ma dọkịta eze. Iji tinye ngwa ngwa nke ụlọ ọgwụ eze njikwa, ị dị nnọọ mkpa pịnye aha njirimara gị, na-echebe site na onye paswọọdụ, na ị pịa akara ngosi na kọmputa gị na desktọọpụ. Na-agbakwunye na nke ahụ, onye ọrụ ọ bụla nke ngwanrọ ụlọ nyocha ahụike nwere ụfọdụ ikike ikike, nke na-egbochi ọnụ ọgụgụ data onye ọrụ ahụ hụrụ ma jiri. Akpaaka nke ụlọ ọgwụ eze na-amalite site na ndị ahịa 'na-eme oge. Ebe a, gị na ndị ọrụ na-eji eze ụlọ ọgwụ aza ajụjụ omume na-agba na onye ahịa. Iji debanye aha onye ọrịa ị kwesịrị ịpị aka abụọ na oge dị mkpa na taabụ nke dọkịta dị mkpa na windo ndekọ nke ụlọ ọgwụ eze ma gosipụta ọrụ ndị a ga-ahọrọ site na ndepụta ọnụahịa ahaziri.
A na-echekwa ozi niile ma nwee ike dezie ya na ngwa ụlọ ọgwụ eze, na-eburu n'uche ihe gbasara nzukọ gị. Nchịkọta ngwanrọ maka nlekọta ahụike eze nwere ngalaba 'Akụkọ' nke bara ezigbo uru maka isi ụlọ ọrụ ahụ. N'akụkụ a nke ụlọ ọgwụ eze na-achịkwa, ị na-eme akụkọ dị iche iche n'ihe gbasara oge ọ bụla. Iji maa atụ, akụkọ banyere ire ahịa na-egosi ego ole e mefuru n'otu usoro. Nkwupụta ahịa ahịa na-egosipụta nsonaazụ nke mgbasa ozi. Nkwupụta nke njikwa ngwaahịa na-egosi ụdị ihe ọ ga - adị mkpa ka enyere gị iwu n'oge na - adịghị anya iji mee ka ụlọ nkwakọba ihe gị zuru oke. Ngwa ahụike ụlọ ọgwụ abụghị naanị dabara adaba nye ndị ọrụ ahụike niile, kamakwa ọ na - enye gị ohere ịmekọrịta mmekọrịta n'etiti ndị na - ebubata ngwa ahịa, ndị nwe ụlọ na ụlọ ọrụ mkpuchi. Nwere ike ibudata a free version nke na-aza ajụjụ software maka eze ụlọ ọgwụ anyị na ebe nrụọrụ weebụ. Machiini gị na nzukọ na-enyemaka nke eze na-aza ajụjụ omume!
Njikwa nsonaazụ na nlekota nke usoro niile bụ isi ihe na-eme ka iwu na ụlọ ọgwụ eze. Ọganihu ego na mbelata ego ga-abụ ihe omume na-enweghị usoro ma ọ bụrụ na ịnweghị esochi nsonaazụ ya. Usoro mmemme ahụ na - ewepụta ndị na - egosi ihe njikwa akara niile, na - ewuli ike mgbanwe nke mgbanwe na mmekọrịta na nsonaazụ, wee gosipụta ozi esichara n'ụdị akụkọ na nkwenye. Nke a na-eme ka nsonaazụ pụta. Banyere ịba ụba azụmaahịa - nke a bụ ihe ọ bụla onye njikwa ụlọ ọgwụ eze na-arọ nrọ maka ya. Were ya na ị ruru ogo ebe azụmahịa gị pere mpe n'okpuru ọnọdụ ugbu a. Expandgbasawanye azụmaahịa gị na-eme ka ọ nwee uche na usoro nke mgbakwunye ọrụ mgbakwunye. Sol doziwo nsogbu ahụ na mgbazinye, akụrụngwa, na ndị ọrụ ego. Mana ụyọkọ ajụjụ ndị ọzọ ka dị: Otu esi azụ ndị ọrụ, nye ha ozi na ahụmịhe niile ị nwetagoro? Kedu ka ị si achịkwa ọrụ ha? Kedu ka itinyere atumatu ma lelee nsonaazụ ya? Azụmahịa azụmaahịa na-edozi ajụjụ ndị a niile.
E wuru usoro mmemme USU-Soft na ụkpụrụ nkewa nke ọrụ - dabere na ọrụ n'okpuru nke onye ọrụ ahụ batara. Enwere ọrụ ndị bụ isi ('Director', 'Administrator', 'Dentist'), mana na mgbakwunye gị nwere ike ịmepụta ọrụ na akaụntụ maka ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ndị ọzọ, dị ka 'Akaụntụ', 'Ọkachamara ahịa', 'Ọkachamara ọkachamara' na ihe ndị ọzọ. Ọrụ maka ịbanye n'ime usoro mmemme na-ekpebisi ike site na ọrụ ahụ, nke edobere mgbe ị na-eke kaadị na akaụntụ (paswọọdụ maka ịbanye n'ime usoro mmemme) maka ndị ọrụ ọ bụla. Yabụ, ịkwesịrị ijupụta ozi gbasara onye ọrụ ahụ. Opekempe ihe ọmụma achọrọ bụ aha mbụ, aha ikpeazụ na ọrụ. Iji kọwaa ọrụ, pịa aka nri na mpaghara 'Họrọ ọrụ' ma gbakwunye nhọrọ sitere na ndepụta ndị a tụrụ aro (ndekọ 'Ọkachamara' ejirila anyị jupụta na ọkwa nke ntinye mmemme, mana ị nwere ike idezi ya). Ọ bụrụ na onye ọrụ nwere ọtụtụ ọrụ, ọ dịghị mkpa ịmepụta ọtụtụ kaadị. O zuru ezu ịkọwapụta ọrụ ya niile na otu. Iji mee nke a nri-pịa ọrụ ọrụ na gbakwunye otu nhọrọ si aro ndepụta.
Ngwa a nwere ọtụtụ akụkọ iji gosipụta ọnọdụ nke mmepe ụlọ ọgwụ eze. Nkwupụta 'Ego na-egosi' na-egosi mbata ego na ọpụpụ ma na-enye gị ohere ijikwa ha. Ọ bụrụ na mkpesa ego nke ụbọchị ahụ bụ otu akụkọ ahụ emepụtara na mmemme mmemme, ị nwere ike iji obi ike kwuo na iwu na ịkwụ ụgwọ niile agbaala site na mmemme mmemme, ma nwee ntụkwasị obi data ego.
'Ego ha nwetara site na mpaghara ebe ị na-arụ ọrụ' ga - enye gị ohere ịhụ ego ole ngalaba ụlọọgwụ ahụ na nke ọ bụla dọkịta na - eweta. akwụkwọ ikike, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ụgwọ, ego na-akwụ ụgwọ, na ndị ọzọ dị mkpa ego metrics. Akụkọ nhọpụta na-enyere gị aka inyocha oge onye ọrịa nọrọ n’ụlọọgwụ. Nke a bụ otu akụkọ dị oke mkpa. Ọrụ gị na ha ịrụ ọrụ na-enye gị ohere iru ọkwa ọrụ ọhụrụ ma melite arụmọrụ nke ndị dọkịta na ndị nchịkwa, wee si otu a bawanye uru nke ụlọ ọgwụ. Nkwupụta 'Dọkịta' na-egosi ma e mepụtara usoro a nke ọma, otu uru dọkịta ọ bụla bara n'ụlọọgwụ, na nke dọkịta na-eweta ego kachasị ego.